Nagu saabsan - Ningbo Boyu Waterproof Waxyaabaha Co., Ltd.
Ningbo Boyu wax biyuhu xireen Co., Ltd.
Ningbo Boyu wax biyuhu biyuhu Co., Ltd.A soo saaraha xirfadle ah kaas oo cilmi baaris iyo horumarineed, productionand iibinta hal shirkado. oo ku taal aagga warshadaha Chongshou ee Cixi Ningbo, oo leh marin gaadiid oo ku habboon.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee xumbada polyurethane grouting, xuubka biyuhu xireen, xirxirayaasha irbadaha duritaanka, bamka qashin qubka, ibta dufanka iyo waliba qaybo. Awoodda 120,000,000 xabbad-joojiyayaal irbad lagu durayo, Dhammaan alaabooyinkayagu waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah waxaana si weyn loogu qadarinayaa suuqyo kala duwan oo adduunka oo dhan ah.
Gebi ahaanba biyo-diid, tayada ayaa dhaqankeenna ah. adeeg OEM ah oo habeysan Waxaan si diiran u soo dhaweyneynaa baaritaankaaga xiriirka ganacsi ee muddada dheer, horumarinta is-kaashatada, waxtarka labada dhinac.
Waxaan diirada saareynaa soo saarida badeecooyin tayo sare leh oo loogu talagalay suuqyada dhamaadka-suuqyada wax soo saarkeena waxay la jaan qaadayaan heerarka caalamiga ah, waxaana badanaa loo dhoofiyaa Yurub, America, Japan iyo meelo kale oo adduunka ah.
Waxaan leenahay koox xoog leh oo R & D ah, waxaanna horumarin karnaa oo soo saari karnaa alaab sida waafaqsan sawirada ama muunadaha ay macaamiisha bixiyeen.
Waxaan leenahay warshad noo gaar ah.Sidaas darteed waxaan si toos ah ugu soo bandhigi karnaa qiimaha iyo wax soo saarka.
Waxaan leenahay xariiq wax soo saar oo loogu talagalay xirayaasha cirbadeynta, iyo mashiinka mashiinka lagu duro. sidoo kale qaybaha. Polyurethane xumbo iyo walxaha xuubka biyuhu galaan.
Awooddeena wax soo saar sanadle ah waxay ka badan tahay 80,000,000, kumbiyuutarrada .waxaan la kulmi karnaa baahiyaha macaamiisha kala duwan oo leh tiro iibsi oo kala duwan.
Sanadihii la soo dhaafay, oo leh awood farsamo oo xoog leh, alaab tayo sare leh oo qaan gaar ah, iyo nidaam adeeg oo qumman, waxaan ku guuleysanay horumar deg deg ah, tusmooyinka farsamada iyo saameynta wax ku oolka ah ee badeecadeeda ayaa si buuxda loo xaqiijiyay oo loo amaanay inta badan dadka isticmaala, iyo helay shahaadada alaab tayo sare leh, waxayna noqdeen shirkad caan ku ah warshadaha.
Mustaqbalka, shirkaddu waxay sii wadi doontaa inay siiso ciyaar buuxda oo ku saabsan faa'iidooyinkeeda, marwalba waxay u hoggaansameysaa mabaadii'da "hoggaanka sayniska iyo tiknoolajiyada, u adeegida suuqa, ula dhaqanida dadka si daacadnimo leh oo raadineysa kaamilnimo" iyo falsafadda shirkadaha ee "alaabooyinka dadka ", oo si joogto ah u fulinaya hal-abuurnimada teknolojiyadda, hal-abuurnimada qalabka, hal-abuurka adeegga iyo habka hal-abuurka maaraynta, iyo si joogto ah u soosaaraya alaab qiimo badan oo wax-ku-ool ah si loo daboolo baahiyaha horumarka mustaqbalka. Iyadoo loo marayo hal-abuurnimo si joogto ah loo soo saaro alaab qiimo badan oo waxtar leh si loo daboolo baahiyaha horumarka mustaqbalka, isla markaana si deg deg ah macaamiisha loogu siiyo tayo sare, alaab qiimo jaban ayaa ah dadaalkeenna hagar la’aanta ah ee ujeeddada.